FBC - Zooniin Industirii Bahaa Itiyoophiyaa ijaarsa boqonnaa lammataa jalqabuuf jedha
Zooniin Industirii Bahaa Itiyoophiyaa ijaarsa boqonnaa lammataa jalqabuuf jedha
Finfinnee, Waxabajjii 13, 2018 (FBC) Fedhii kaampaanota alaa dabaluun ilaalamee Ijaarsi boqonnaa lammaataa Zoonii Industirii Bahaa Itiyoophiyaa (Eastern Industry Zone) akka jalqabamu itti-aanaan daayirektarri gandichaa himan.
Itti-aanaan Daayirektara Zoonii Industirii kanaa Jiyahoo Yonfishun akka himanitti gandichi yeroo ammaa iddoo invastaroonni irratti hojjatan fixaa jira.
Akka itti-aanaa daayirektarichi jedhanitti gandicha keessa ijaarsa irra kanneen jiran dabalatee kaampaanota saddeettamii sadiitu jiru; isaan keessaa shantamii ja’a oomishuu kanneen jalqabanidha.
Jiyaahoon akka jedhanitti hanqina man-kuusaa yeroo ammaa jiruuf, zoonin industirichaa abbootii-qabeenyaa man-kuusaa kireeffeeffachuuf yookiin warshaa isaanii gandicha keessatti ijaaruuf gaafatan haaraa keessummeessaa hin-jiru.
Zooniin Industirii Bahaa Itiyoophiyaa kun Itiyoophiyaa keessatti zoonii industirii jalqabaa Mootummaa Itiyoophiyaa, biyyattii Ardii Afriikaaf wiirtuu oomishaa gochuuf, paarkota industirii dabalataa kaan iddoo kaanitti akka hundeessu kakaasedha.
Oduuwwan Biroo « Gahee Daandii Qilleensaa Itiyoophiyaa fi Itiyoo-telekoom gariin gurguruuf kan murtaa’e hanqina sharafa alaa furuufi	Galiin damee mi’eessituu irraa argamaa jiru waggaatti giddu-galeessaan Doolaara miliyoona 21 hin-caalu »